LeadBest Consulting Group - Asia Venture Studio
中 EN မြန်မာစာ
Venture Studio ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်စို့
ကျွန်တော်တို့ LeadBest အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အမှုဆောင် အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် Venture Studio စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖန်တီးလျက်ရှိပြီး ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့်အားဖြည့်ခြင်းမှ အစပြု၍ blockchain နည်းပညာများ၊ မြန်ဆန်တဲ့အတွေးအခေါ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး အစရှိသောအဆင့်မြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နည်းပညာ များဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းများဈေးကွက်ထဲသို့စတင်ဝင်ရောက်ရန်ကူညီခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းပေးခြင်းတို့ဖြင့် အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ LeadBest ကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက် ပေးမလဲ?
အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့နည်းပညာ ၅ခု
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့နည်းပညာ အင်အားကြီး ၄ခုကို သင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရဲ့လက်ရှိအောင်မြင်မှုမှာ ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် တော့ သင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းထပ်မံတိုးတက်ခြင်းရဲ့လမ်းစဖြစ်လာမှာပါ၊
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးမှာ တကမ္ဘာလုံးအပြိုင်အဆိုင်တွေများပြားနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ LeadBest က AI နည်းပညာများ၊ IoT နည်းပညာများ၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းခြင်း (cloud) နည်းပညာများ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လျင်မြန်စွာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်နည်းပညာများ ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းများ အတွက် အခွင့်အလမ်းများလျင်မြန်စွာဆုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ပိုမိုတိုးတက်စေမှာပါ။
လျင်မြန်စွာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်းနည်းပညာ ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတင် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာလောကကိုများစွာပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲကိုတုန့်ပြန်နိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့ က လူကြီးမင်းတို့ကို လျင်မြန်စွာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်းနည်းပညာ အသုံးပြုတဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပေးပြီး အဲဒီနည်းပညာနဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Blockchain နည်းပညာဟာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေမယ့် နည်းပညာတခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း တွေရဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုံခြုံရေးကို အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် blockchain နည်းပညာ ကိုလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများရှိပါတယ်။
လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာလွှမ်းမိုးလာတာနဲ့အမျှ အတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်တွေပိုမိုများပြားလာမှာပါ။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာအဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး အတွက်ပါတာဝန်ယူ ပေးမှာပါ။
စီးပွားရေးစီမံကိန်းကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ ဖြင့်အားဖြည့်ခြင်း နည်းဗျုဟာ
လုပ်ငန်းမျိုးစုံနဲ့ အဆင်ပြေစေမည့် ခေတ်ရှေ့ပြေးနည်းပညာ
စီမံကိန်းများကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်း ပျိုးထောင်ပေးခြင်း
ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းတို့နဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာလဲ?
ဘာကြောင့် LeadBest ကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ?
InstaHealth သည်ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် စီမံခန့်ခွဲပေးသည့်စနစ်တခုဖြစ်သည်။ Covid-19 စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအစောပိုင်းကာလများမှစ၍ ဤ app ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ‌တိုင်းတာပေးပြီး cloud management တွင်သိမ်းဆည်းကာ သာမန်မဟုတ်သော အခြေအနေများအတွက်‌ ခြေရာခံမှု(‌abnormal status tracking)များကို ယနေ့အထိလုပ်ဆောင်ပေးနေပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
leAD, မြန်မာအခြေစိုက် အင်တာနေရှင်နယ်ကြော်ငြာ အေဂျင်စီ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပါသည်။ AI နည်းပညာ၊ အချက်အလက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းပညာ နှင့် fanpage များကိုတဟုန်ထိုး တိုးတက်စေမည့် အထောက်ကူပြု tool (Aphrodite) အစရှိသည်တို့ဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်များကို ထိရောက်သော ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက် နည်းဗျုဟာများ ရေးဆွဲပေးပြီး သန်းပေါင်းများစွာသော ပရိသတ်များထံသို့ ရောက်ရှိရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
TEXTIP ပုံရိပ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသော အထည်အလိပ်များကိုအတိကျအလျင်မြန်ဆုံး ရှာဖွေပေးကာ အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းပေးခြင်း(cloud technology)၊ AI နည်းပညာ၊ visualization search functionတို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီဇိုင်နာများအတွက် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ AI မှတဆင့် အသင့်တော်ဆုံး၊ အကောင်းမွန်ဆုံး စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲမှ အထည်အလိပ်များကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါသည်။
LeadSuite ဟာ blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုလုပ်မီ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေစဉ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် အစရှိသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံအမျိုးမျိုး ပါဝင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ အတွက် ပိုမိုစိတ်ချ လုံခြုံ၍ ထိရောက်သော tool တခုဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းများ！ LeadBest သည် Venture Studio သဘောတရားများ ဖြင့်ကုမ္ပဏီများအားစီးပွားရေးပုံစံအသစ်များရှာဖွေရာတွင် ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးလျက်ရှိ။
ကပ်ရောဂါအခြေအနေအတွင်းပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပါ။ LeadBest သည် ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုဖန်တီးပေးနေပါသည်။
ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသောအခြေအနေတွင် Cloud-based ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ရန်ခေတ်မီသွက်လက်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုagile thinkingကိုအသုံးပြုနည်း။
"InstaHealth"သည် ဝန်ထမ်းများ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာပြီး မှတ်သားပေးထားနိုင်သောကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
LeadBest ၏ ထုတ်ကုန် တခုဖြစ်သော InstaHealth သည် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်တိုင်းတာမှုနှင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်တက်ခြင်း စနစ် တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်တခုဖြစ်သည်။
InstaHealth သည် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်တိုင်းတာမှုနှင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်တက်ခြင်း စနစ် တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ​၏ ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိ
သာမန်ရိုးကျ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း မှဒီဂျစ်တယ် စနစ်သို့ကူးပြောင်းခြင်း ခြေလှမ်း: “Venture Studio”၏အကူအညီ ဖြင့်ချည်မျှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အားနည်းချက်များမှတစ်ဆင့် အားသာချက်များအဖြစ်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှု
KOL တဦး ၏ တန်ဖိုးကို သိပ္ပံနည်းကျဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ? ထိုင်ဝမ်ပညာရှင်များမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ထိပ်ဆုံး KOL အယောက်၅၀ ကိုသုတေသနပြုသည့်အတွေ့အကြုံအား လေ့လာကြည့်ကြပါစို့
ဆောင်းပါး - “တိုးချဲ့တီထွင်မှုအသစ်"- ပြည်ပမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံVenture Studioဆိုသည်မှာ?
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ Top 10 ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာ startups ကုမ္ပဏီတွင် Virtual ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ၆ခုပါရှိ
ထိုင်ဝမ်startupကုမ္ပဏီLeadBest နှင့် နာမည်ကြီး securities token ထုတ်လုပ်ရေးပလက်ဖောင်း, Polymath, တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်: ငွေကြေးဆိုင်ရာအခြေအနေအသစ်တစ်ခုဖန်တီး
ကျွန်တော်တို့ LeadBest အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံတကာ အလုပ်အမှုဆောင် အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့်အားဖြည့်ခြင်းကစပြီး blockchain နည်းပညာများ၊ မြန်ဆန်တဲ့အတွေးအခေါ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး အစရှိသောအဆင့်မြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နည်းပညာ များဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းများစျေးကွက်ထဲသို့စဝင်ရန်ကူညီခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းပေးခြင်းတို့ဖြင့် အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။